पत्थरीको समस्या छ: यस्ता प्याज खानुका फाइदाहरू !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वास्थ्यका हिसावमा प्याज खानु निकै फाइदाजनक छ । यसका केही फाइदा यसप्रकार छन् ।प्याजलाई सलादका रूपमा खान सकिन्छ । यसको रस पिउँदा लुबाट जोगिन सकिन्छ । पिसाब रोकिने समस्या भएकाहरूले प्याजको रस पिउनु लाभदायक हुन्छ । नियमित प्याज खाँदा पर्याप्त मात्रामा पाचन रस उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा खानेकुरा राम्रोसँग पच्छ ।
शरीरको कुनै अंग सुन्निए अथवा पीडा भए प्याजको रस लगाउँदा सुन्निएको घट्नुका साथै पीडासमेत कम हुन्छ । काँचो प्याज खाँदा पत्थरीको समस्यामा समेत फाइदा मिल्छ ।यो पनि पढ्नुहोस् ःसकारात्मक उर्जाका लागि घरमा राख्नुस् यी ५ विरुवा !!ससकारात्मक उर्जाको हामी सबैलाई आवश्यकता हुन्छ । र आफ्नो आसपास सकारात्कमता बनाइ राख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जिको माहोल बन्न सकोस् । र, सवै नकारात्मक उर्जा हामीबाट टाढा जाओस् ।
सकारात्मक उर्जाका लागि केही केही विरुवाले पनि साथ दिने गर्छ ।हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक उर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बोट विरुवा छन् जसले हामीलाई उर्जावान बन्न मद्दत गर्छ ।तुलसीःतुलसी स्वास्थ्यका हिसावले पनि निकै गुणकारी वस्तु हो । यो गुणकारी विरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक उर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ ।
मनिप्लान्टःघरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुने छ । यस विरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ ।घ्यू कुमारीःशरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्व छ । तर के तपाइलाई घरमा रहेको नकारात्म उर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छ ?